Toerana filokana an-tserasera Belzika - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(434 vato, average: 5.00 avy tany 5)
Loading ... Gambling in Belgium
Belzika dia manana tantara manankarena amin'ny fipoiran'ny filokana. Hitan'ny mpahay tantara eto ny fanadihadiana voalohany momba ny filalaovana karatra any Eropa, izay nanomboka tamin'ny 1300 mi nandritra ny taona maro, ary tamin'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo tany Belzika dia nitana loteria voalohany.
Hatramin'ny taona 1999, ny orinasa filokana any Belzika dia heverina ho ara-dalàna, amin'ity taona 7 Mey ity dia nisy lalàna iray namoaka ny lalàna ho ara-dalàna ny fihazonana ny filokana ao amin'ny firenena. Tao anatin'ny taona vitsivitsy dia nisy fanitsiana navoakan'ny lalàna, nefa izy ihany no fototry ny filokana any Belzika. Androany dia mifehy ny asa filokana Gambling Commission, izay natsangana tamin'ny taona 1999. Ity rafitra ity dia mifandraika amin'ny fahazoan-dàlana, ary koa ny fanaraha-maso ny fiasan'ny casino ary miaro ny zon'ny mpilalao.
Ny fampahalalana ho an'ny mpitsidika ny lahatahiry filokana amin'ny Internet, any Belzika dia misy fandrarana ny fitsidihana olona casino latsaky ny 21 taona, ary koa ny mpikambana ao amin'ny fitsarana sy ny polisy. Ity farany dia afaka mitsidika toeram-pilokana raha tsy amin'ny fanatanterahana ny asany.
Onjam-peo an-tserasera any Belzika
Araka ny lalàn'ny filokana an-tserasera any Belzika, mba hahafahan'ny orinasa manome serivisy amin'ny filokana an-tserasera eto amin'ny firenena, dia tsy maintsy vahaolana ihany koa ho an'ireo orinasa filokana terestrialy izany. Ny Komisiona filokana Belzika dia manara-maso akaiky ny fampiharana ny lalàna ary manao lisitra mainty an'ireo tranonkala filokana an-tserasera iraisam-pirenena any Belzika, miasa tsy ara-dalàna ao amin'ny firenena. Ho an'ny fanitsakitsahana ireo mpiasan'ny lalàna dia miatrika lamandy, ny vola izay mety hahatratra hatramin'ny 100 euro.
Lisitry ny Top Sites 10 Belgium Online Casino
Mitohy ny diantsika, ary amin'ny fomba ny firenena dia ny CasinoToplists trano mimanda Gothic, waffle sy sôkôla matsiro - Belzika. Andao hojerentsika izay zavatra mahaliana miandry ny mpizahatany sy ny mpiloka ao amin'ny firenena.
Belzika - Teny vitsivitsy momba ny tantara sy ny toerana misy azy;
Ny banky any ambanivohitra dia avela amin'ny 1999;
rehetra ao amin'ny casino 9 firenena;
fitsipika henjana sy fanaraha-maso ny fanjakana;
Trano dimy ao Belzika Bruxelles miaraka amin'ny adiresy renivohitra;
Zava-baovao mahaliana momba ny firenena sy ny mponina.
Toerana misy an'i Belzika sy tantara ara-tantara fohy
Tany am-piandohan'ny vanim-potoana misy anay dia nipetraka tao amin'ny faritry ny Belzika ankehitriny Belzika foko, nanana fiaviana Celtic. Avy amin'ny anaran'ny foko izy io ary avy amin'ny anaran'ny firenena.
Tamin'izany fotoana izany, Belzika dia tao amin'ny empira Burgundian, Roma, Espana, dia ao amin'ny Netherlands ary koa i Frantsa.
Ny fotoana voafaritra ho an'ny firenena dia ny revolisiona Belzika tamin'ny 23 septambra 1830 - nanambara fanjakana mahaleo tena i Belzika, ary lasa Mpanjaka Leopold I. Ny familiana kosa dia nijaly mafy raha izaho sy ny Ady Lehibe II - maro tamin'ny tanàna no saika rava tanteraka, momba ny fihenan'ny toekarena ary milaza fa tsy misy kaonty.
Ankehitriny ny rafitra politika belza dia monarka parlemantera lalàm-panorenana. Tamin'ny 21/07/2013, notarihin'i King Philip ny firenena. Mizara telo ny firenena (Flemish, Walloon ary Bruxelles-Capital), ny 3 voalohany dia mizara ho faritany sy maro hafa.
Casino sy filokana ao Belzika
Herintaona iray natokana ho an'ireo orinasa filokana belza no nanomboka tamin'ny taona 1999 - tamin'izay no nanarahana ny lalàna sy ny fanitsiana izay mbola mifehy ny asan'ny trano filokana sy trano filokana. Ny totaliny any Belzika 9 dia misy trano filokana: 1 no misy ao an-drenivohitra - Bruxelles, 4 ary trano filokana ao amin'ny faritr'i Flemish sy Walloon any Ostend, Namur, Spa, Knokke-Heist, sns.
Ny casino rehetra dia miasa eo ambanin'ny fahazoan-dàlana ary manana tahirim-bola antoka - izany hoe ny petra-bola izay raha misy afaka mandeha na hahazo vola na fahazoan-dàlana.
Ny olona manatrika trano filokana dia tsy afaka mahazo afa-tsy ny olona nahatratra ny dingana nahatratra 21 taona (mila pasipaoro). Ny casino rehetra dia mahazo ny kaontin'ny karany amin'ireo mpilalao ary tsy maintsy mitahiry ny angona mandritra ny 10 taona. Ho an'ny trano filokana sy trano filokana dia tsy mahazo misolo tena ny mpitsara, ny mpitsara, ny notary ary ny polisy. Afa-tsy izany, mazava ho azy, ireo olona ireo manatanteraka ny asany.
Ary koa ny fidirana ao amin'ny casino dia mety hakatona rehefa apetraka amin'ny dokotera, mpikarakara, havana akaiky miaraka amin'ny fanomezana antontan-taratasy mety hanamafisana ny filokana miankina amin'ny filokana. Ny mpilalao fotsiny dia afaka mangataka ny hanakana ny fidiranao - tokony hampandre ny casino fotsiny izy.
Araka ny efa azonao, ao Belzika mitambolimbolina am-pilaminana sy miaraka amin'ny rariny.
Ao amin'ny renivohi-pirenena - Bruxelles - casino «Grand Casino Brussels Viage» Izy io dia mampiantrano fifaninanana poker SIT & GO'S amin'ny alatsinainy sy alarobia, miaraka amin'ny fividianana $ 60, tsy misy fetra tsy misy fetra Hold'em na Omaha dia tanterahina isan'andro ao amin'ny lalao mandroso amin'ny lalao WPT ambaratonga WPT (... World Poker Tour) Casino dia manolotra safidim-pifidianana marobe - milina 375 miaraka amin'ny taha 1 ka hatramin'ny 1 euro, blackjack, roulette, baccarat., Mahjong ary Money Wheel Ho an'ireo mpanjifa mitaky dia misy efitrano VIP misy menio manokana misy sigara sy whisky avo lenta.
mozea ny labiera (Belgische Brouwers). Adiresy: Grand-Place, 10. Eto, ireo tia labiera labiera dia ho afaka hahita ny fampirantiana tamin'ny taonjato faha-18, ary hianatra zavatra betsaka momba ny fanaovana labiera maoderina amin'ny alàlan'ny haitao multimedia. Ny fidirana amin'ny tranombakoka dia mitentina 5 €.
Museum “Autoworld» (Autoworld). Adiresy: Parc du Cinquantenaire, 11 taona. Eto, ao ambanin'ny tafo iray, ny tranombakoka dia misy maodely fiara 400 mahery: antitra, fanatanjahan-tena, kintana fiara, fiara ekolojika, fiara munisipaly ary moto. Tapakila olon-dehibe - € 9, ankizy (manomboka amin'ny 6 ka hatramin'ny 12 taona) - € 5, ambany - tsy andoavam-bola.
Ny mariky ny tsangambaton'i Bruxelles 'Atomium'. Adiresy: Avenue de l'Atomium, 1020. Manaraka ny gara metro Heizel. Ity tsangambato ity dia kintana kristaly atoma vy, izay nitombo in-160 miliara. 102 metatra ny haavony, ary manodidina ny 2,400 XNUMX taonina ny lanjany. Fanorenana mahavariana tokoa!
Valan-javaboary "Mini-Europe". Toerana: akaikin'ny tsangambato "Atomium". Ilay valan-javaboary dia ahitana ny toerana tsara indrindra any Eropa, tanterahina amin'ny ambaratonga 1 ka hatramin'ny 25. Raha atotaly dia nanolotra tanàna 80 sy zavatra 350. Ny malaza indrindra, mazava ho azy, Big Ben, ny Eiffel Tower ary ny Leaning Tower ary ny arabe Venetian.
Museum momba ny tantara an-tsary. Address : Belian Comic Strip Center 20 rue des Sables (Zandstraat). Ireo mpankafy tantara an-tsary dia hankafy ny fampirantiana ny tranombakoka, izay ahitana asa mihoatra ny 25,000 hatramin'ny "volombava" be indrindra mandraka androany. Etsy ankilany, miaina any Belzika ny mpanoratra boky tantara an-tsary betsaka indrindra.
Zavatra mahaliana momba an'i Belzika sy Belza
Izy io dia fonenan'ny olona mihoatra ny 10 tapitrisa - vahiny be dia be;
Mamokatra labiera 800 mahery ny firenena, ary misotro 150 litatra isan-taona ny mponina tsirairay amin'ity firenena ity. Eto fotsiny dia mamokatra sôkôla 220,000 22 taonina isan-taona - XNUMX kg isan-kapita. Tompon-kevitra belza no tonga amin'ny karazana "praline";
Labiera kely tavoahangy - 0.25 litatra, ary bebe kokoa - 0.33 litatra, ary tavoahangy misy fehezana 0.5 toa zara raha hita;
Amin'ny Flanders, mitenena amin'ny fiteny holandey ary amin'ny Wallonia amin'ny fiteny frantsay. Amin'ity tranga ity dia valontsam milay be ny Flemings;
Maneho fahalalam-pomba ny belza ary miaina amin'ny fandaharam-potoana - fitsidihana feno fotsiny aorian'ny fety izay mety tsy hahombiazanao;
Belzika - firenena mitarika eo amin'ny sehatry ny fanapahana diamondra;
Ny 93% ny tokantrano dia manana trano biby misy biby;
Ny ankamaroan'ny Belarosiana dia tia manary trano sy trano fisakafoanana ary café;
Ny akanjo malaza "Manneken Pis" mandritra ny fety sy ny fankalazana dia miakanjo akanjo, izy rehetra dia vita amin'ny 600;
Amin'ny Alahady, tsy misy olona miasa eto - na ny fivarotam-panafody aza;
Eto dia namboarina ny saxophone, ny loko menamena sy ny fiaramanidina.
Belzika amin'ny sarintany Eoropa
0.1 Onjam-peo an-tserasera any Belzika
0.2 Lisitry ny Top Sites 10 Belgium Online Casino
3 Gambling in Belgium
3.0.1 Toerana misy an'i Belzika sy tantara ara-tantara fohy
3.1 Casino sy filokana ao Belzika
3.1.1 Brussels attractions
3.1.2 Zavatra mahaliana momba an'i Belzika sy Belza
3.1.3 Belzika amin'ny sarintany Eoropa